Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » Ny fivoriana Pan-Karaiba dia manazava ny Vondrona Indiana Atsinanana any St.Vincent
St.Vincent any Karaiba dia misy olona eo amin'ny 111,000 eo, ary ny ankamaroan'ny olona manana razambe afrikana. Misy olona vitsivitsy mifangaro Karaiba sy Afrikana, Eoropeana ary Indianina Atsinanana (antsoina hoe Karana).
Nisy ny fivoriana Pan-Caribbean natao tany St.Vincent momba ny lohahevitry ny Vondrona Indiana Atsinanana.
Ny filohan'ny St. Vincent sy ny Grenadines Indian Heritage Foundation ary ny Consul Honorary any India ho an'ny SVG dia iray tamin'ireo mpikabary hetsika.
Ny lohahevitra lehibe indrindra dia ny hoe ny fikambanana Indiana any amin'ny faritra dia mila miara-miasa akaiky kokoa hahazoana synergie lehibe kokoa.
Ny karana dia olona manodidina ny 6,660 (na 6 isan-jato) amin'ny totalin'ny mponina. Na dia miparitaka any amin'ny tanàna maro aza ny karana ao St.Vincent, dia misy faritra samy hafa izay iorenan'izy ireo, dia ny Richland Park, Calder, ary Rosebank ary koa Akers, Georgetown, Park Hill, ary Orange Hill.
Sivy taona lasa izay, nitarika ny Ivon-kolontsaina Indo-Caribbean (ICC) aho, sy ny hafa, tamin'ny fikarakarana ny Konferansa voalohany momba ny The Indian Diaspora ao St.Vincent. Nahomby ny fihaonambe.
Nisy fivorian'ny besinimaro nataon'ny ICC natao vao haingana (21 feb 2021) momba ny lohahevitra "The East Indian Community in St Vincent." Ny fivoriana Pan-Caribbean dia natolotry ny ICC. Notarihin'i Sadhana Mohan avy any Suriname ary notarihin'i Bindu Deokinath Maharaj avy any Trinidad.
Ireo mpandahateny dia i Junior Bacchus, filohan'ny St.Vincent ary ny Grenadines (SVG) Indian Heritage Foundation & Consul Honorary India ho an'ny SVG; Cheryl Gail Rodriguez, mpamokatra fifaninanana hatsaran-tarehy MISS SVG sy MISS CARIVAL nandritra ny 20 taona, ary Justice of the Peace; ary D. Lenroy Thomas, mpiara-manorina ny SVG Indian Heritage Foundation & ny vondrona Facebook sy mpitantana tranokala SVGIHF.
Ireto manaraka ireto dia sombintsombin'ny fivoriana: